iPhone , mid ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta yar oo aad aamini kartid waa VLC. VLC ayaa sameeyay sumcaddii ay taageero warbaahinta dhameystiran nooc oo ah qaab iyo siinaysaa shaqeynta ka badan kasta oo kale oo warbaahinta ciyaaryahan dalab kartaan. Haddii aad raadinayso in ay isticmaalaan VLC boggayaga iPhone Halkaan waxaa ah waxyaabo dhowr ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan VLC media player .
Qaybta 1aad: Sida loo Download iyo rakib VLC on iPhone
Qeybta 2: Sida loo dar videos in VLC media player on iPhone
Qeybta 3: Ka waran haddii VLC Video karin furan Files
Qaybta 1aad: Sida loo Download iyo rakib VLC on iPhone?
Waa hagaag, iPhone isagoo casriga ah, waxaa jira hab sahlan si markaas aad qabto on desktop. Dukaanka app waa meesha ugu fiican ee lagu soo bixi ciyaaryahan VLC aad u dejisan iyo rakibi aad iPhone. Halkan waxa ku jira tallaabooyin ay ku soo bixi VLC aad iPhone:
Just furo dukaan app ku saabsan iPhone. Si kastaba ha ahaatee, hubi in aad isticmaasho Wi-Fi si ay u helaan internet-ka u fiican xawaaraha download.
Hadda raadiyo VLC ka dibna garaac VLC ah.
Hadda uun ka jaftaa ku rakibi.
Your download toos ah u bilaabi doonaa telefoonka, oo lagu rakibi doonaa. Waxaad ka heli kartaa VLC on app liiska.
Qeybta 2: Sida loo dar videos in VLC media player on iPhone?
Su'aasha soo socota ka dib markii ciyaaryahanka ku rakibidda video waa sida in aad ku darto videos in aad app cusub VLC si aad bilaabi kartaa riyaaqayaa aad ugu jeceshahay videos . In kastoo VLC si toos ah ogaadaa inta badan videos ku saabsan telefoonka, mararka qaarkood ma dhan la ogaan. Sidaa awgeed, halkan waa hage in ay raacaan, waayo, isaga oo intaa raaciyay in videos VLC:
Marka hore, xiriiriyaan iPhone si aad u computer in uu leeyahay Lugood updated isticmaalaya cable USB.
Burcad Lugood oo taga si qalab aad. Waxaad arki doontaa oo dhan barnaamijyadooda ka.
Waxaad u baahan tahay hoos ugu hooseysa in ay soo gudbiyaan wadaagga ka dibna riix on VLC. On soo socda, guji dar.
Hadda, kaliya dooro files in aad rabto in lagu daro in VLC
Marka geeddi-socodka in la buuxiyo waxaad arki doontaa videos ku saabsan iPhone isticmaalaya VLC. Waxaad kaloo isticmaali kartaa doorasho kale, taas oo ah in ay geliyaan files via Wi-Fi. Si kastaba ha ahaatee, hadii aysan jirin Wi-Fi kor ku xusan habkan waa wanaagsan.
Qeybta 3: Ka waran haddii VLC ma furi kartid Video Files?
In kastoo VLC waa ciyaaryahan warbaahinta dhamaystiran sida ay ciyaari karaan qaab kasta oo la xariirta hayaa laftiisa la codecs cusub laakiin waa ay dhici kartaa in qaar ka videos ma taageersana. Sidaas, maxaad samayn lahayd haddii aad heli in VLC ma ciyaari karo file video aad isku dayayaan in ay arkaan iyo ciyaaro? Waa hagaag, yYou isticmaali kartaa software saddexaad xisbiga sida Wondershare Video Convertor Ultimate si loogu badalo videos galay taageerto formatted. Convertor Video uu ka dhigayaa diinta qaabab warbaahinta quruxsan fudud. Halkan waa wax la Video Converter Wondershare - haddii aad ciyaaryahan VLC ma ciyaari karo, Wondershare aad, kaa caawin karaan waqti kasta, waqti kasta. Software taasina waa u fududahay in ay la tacaalaan oo ay taageertaa qaabab laga heli karaa ilaa taariikhda ugu.
> Resource > iPhone > Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato VLC u iPhone